Ben Chilwell oo sheegay Leicester City Kooxda uu doonayo inuu ku biiro… (Ma Chelsea mise Manchester United?) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
July 29, 2020 at 15:54 Ben Chilwell oo sheegay Leicester City Kooxda uu doonayo inuu ku biiro… (Ma Chelsea mise Manchester United?)2020-07-29T15:54:28+02:00 CAYAARAHA
(Leicester) 29 Luulyo 2020. Daafaca garabka bidix ee Kooxda Leicester City ee Ben Chilwell ayaa la soo warinayaa inuu doonayo inuu ku qasbo kooxdiisa isbuucaan inay u ogolaato inuu u dhaqaaqo Naadiga Chelsea.
23-sano jirkaan ayaa loo aqoonsaday mid ka mid ah bartilmaamedyada ugu sarreeya ee kooxda Blues xagaagan, xilli ay u muuqdaan in ay xoojin doonaan daafacooda oo dhaliyay 54 gool xilli ciyaareedka 2019-20, inkastoo ay sidoo kale doonayso saxiixa daafacan Kooxda Man United.
Qiimaha lagu rabo Chilwell ayaa ku qasabtay Chelsea inay ka fiirsato xulashooyinka ka raqiisan, laakiin Jariiradda The Mirror ayaa sheegaysa inuu ciyaaryahanka haatan ku riixi doono kooxdiisa inuu ka dhaqaaqo dhammaadka xilli ciyaareedkan oo uu ku qasbi doono Leicester inay iska iibiso.
Leicester City ayaa si lama filaan ah ku seegay u soo bixitaankooda Champions League maalinta ugu dambeysay ee xilli ciyaareedka, inkastoo Chilwell uu doonayo inuu ku biiro kooxda ka dhisan London haddana waxaa loo maleynayaa inuu si toos ah ula falgali doono arrintaas.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa ka mid ahaa kooxda Foxes tan iyo markii uu jiray da’da 12-ka sano, waxaana heshiiskiisa haatan uu ku eg yahay illaa sanadka 2024-ka, sidaasi darteed Leicester wali waxa ay doonaysaa inay ku dalbato khidmad layaab leh oo ku saabsan saxiixiisa.
Kooxda Chelsea ayaa horay u la saxiixatay Hakim Ziyech iyo Timo Werner xagaagan, halka sidoo kale la la xiriirinayo inay u dhaqaaqo goolhaye cusub, daafac dhexe oo cusub iyo Kai Havertz.
« Waa kee waddanka heysta keydka ugu badan ee dahabka adduunka?
Guardiola iyo Mourinho oo hoggaaminaya Tababareyaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha July ugu fiicnaa horyaalka Premier League »